“Mabwe asina kuvezwa uye pasina midziyo yedare”- nzira yakanakisa yekuvaka aritari
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » “Mabwe asina kuvezwa uye pasina midziyo yedare”- nzira yakanakisa yekuvaka aritari
“Mabwe asina kuvezwa uye pasina midziyo yedare”- nzira yakanakisa yekuvaka aritari
Murayiro waMosesi unojekesa kana tasvika pakuvaka aritari. Joshua akakunda Mambo weAi mumashure mekurwa kunotyisa akavakira Mwari aritari. Akatevedzera murayiro, wakabva kuna Mosesi:
Joshua 8:30 Zvino Joshua wakavakira Jehova Mwari waIsraeri atari pagomo reEbari,
31 Sezvakanga zvakarairwa vana vaIsraeri naMosesi, muranda waJehova, sezvakanyorwa mubhuku yomurayiro waMesesi; yakanga iri aritari yamabwe asina kuvezwa; hakunomunhu wakanga asimudzira dare pamusoro payo; vakabayira Jehova zvipiriso zvinopiswa, nokubairawo zvipiriso zvokuyananisa.
Aritari, yaidiwa naMwari muBhaibheri, yakasiyana kwazvo nemaaritari aivakwa nemapegani, uye kunyangwe nemaaritari ari mumakereke nhasi uno. Yakasiyana zvakare neingarangarirwe nesu vanhu kana tikanzi tiite zvatinofunga. Dai kwaive kunzi mapihwa basa rekuvaka aritari yekurumbidza Mwari, zvosiirwa kundangariro dzenyu, yaizovezwa nekubata kwehunyanzvi, ichiratidza runako, muchishandisa midziyo inokosha nepamunogona napo. Asi Bhaibheri riri kuedza kutidzidzisa chimwe chinhu chakajekeswa kana tasvika paaritari yaMwari, uye ndicho chikonzero nei iine mirayiro yatisingafungiri asi yakajeka. Regai titarise izvi.
Bhaibheri rinojekesa kuti mutendi umwe nemumwe, imi neni, tiri mabwe eimba yemweya;
1Petro 2:5 Nemi vo, samabwe mapenyu, muvakwe muve imba yomweya, muve vuPirisita vutsvene, kuti mubayire zvibayiro zvoMweya, zvinofadza Mwari nokuda kwaJesu Kristu.
Saka tiri vatendi muna Jesu Kristu tinomubatira zvese sevapirisita tichibayira zvibayiro zvomweya uye semabwe anorarama kuvaka imba yemweya. Chikamu cheimba iyi chichave aritari inovakwa nemabwe anorarama, apo zvibayiro zvemweya zvinobayirwa.
Izvi zvinoreva kuti tinofanira “kuzviramba” paaritari yemoyo yedu patinofa kwatiri pazvivi.
Tinofanira kuzviramba “pachedu” patinofa kwatiri, tozvipira kubvuma kuita kuda kwaMwari.
Tinofanira kuzviitira sarudzo idzi pachedu dzekuda kwedu nesarudzo dzedu dzakasununguka.
Tinoteerera Mwari kwete nekuda kwekuti tinomanikidzwa kana kuti nekuti ibasa redu rekuti timuteerere. Asi tinoteerera Mwari nekuda kwerudo rwekumuteerera. Hatibatiri Mwari nekuda kwerudo rwekuzviwanira chimwe chinhu chekuti tiri kuda kuenda kudenga. Hatibatiri Mwari nekuti tinotya kuenda kugehena. Kuita uku kunotongwa nerudo “rwekuzvidira” kuwana mubairo kana kuti kudzivirira kutongwa. Kufunga kwerudzi urwu kunongoreva kuti “isu” tichiri kurarama uye tiri mumoyo yedu. Tinobatira Mwari nekuti tinomuda seMunhu akanakisa uye tinoyemura kufunga kwake uye tinokurudzirwa nezano rake gurusa rekuzvideredza raakatiratidza uye raachiri kutiratidza muBhaibheri rake. Tinoda kuziva zvakawanda pamusoro Pake nemifungo yake nekuti akanakisa. Tinongoda kuita zvinhu nenzira yake nekuti ane muono mukuru mupfungwa dzake, dzatisingakwanisi kubatanidza. Mwari anoziva zvakawandisa kukunda zvatinoziva isu.
Muvengi mukuru wekuda kwaMwari kuda kwangu. Kufunga kwangu kunoratidzwa nekuita kwangu muzvinhu zvese zvatinosangana nazvo patiri, neshuviro dzenguva inouya dzandiinadzo. Ndinozadzwa zvakanyanya nekushava kuti ndiwane mari uye kubudirira. Ipapo Muono Mukuru waMwari uri kuzarurwa serukova ruri kuyerera muzviitiko zvehupenyu hwevanhu uye ini handisi kuziva kuti achaitei. Ndinoda kuti Mwari vaite kuti kuda kwangu kubudirire, asi Mwari vanoda kuti ndibatsire kuti Muono wake Mukuru uzadziswe.
Torai muenzaniso uyu: Hitira akauraya maJuda mamiriyoni matanhatu negasi muHondo Yepasi Rese Yechipiri. MaJuda aya nemhuri dzavo vakanzwa kunge Mwari avarasa. Chavaisanzwisisa ndechekuti nyika yaive yakavenga maJuda uye yaisazovapa musha muParestina. Kuipa kwekuuraya kwaHitira pakwakaziviswa muna 1945, nyika yakabva yanzwira maJuda tsitsi zvechinguvana, muna 1947 United Nations, nekukunda nesarudzo yevanhu vaviri pamusoro pevaipikisa, vakasarudza kupa maJuda nzvimbo duku muParestina. Uyu ndiwo waive Muono Mukuru waMwari pamusoro pemaJuda. Mwari anovada muIsraeri kuitira kuti maporofita maviri Mosesi naEria, vavadzosere kuna Mesia wavo munguva yeKutambudzika kukuru. Saka Muono Mukuru unozogara uchikurira kuda kwedu kuduku kwekuzvirangarira isu tega . Chokwadi chagara chichikura kubva mukurwadziwa uye kutambudzika. Takagadzirira here kuitira Mwari chibayiro chakadai.
Chikonzero chikuru chatiri pano panyika hachisi chekuti tipfume tive nezvinhu zvakawanda, asi kuti tidzokere pakutenda kwekereke yekutanga yeTestamente Itsva. Mwari anoda kutidzosera kunotenda zvakanyorwa muBhaibheri. Ndiwo muono wake mukuru nhasi uno. Zvibayiro zvichatambirwa naMwari chete ndezvekuti kana tikazvipira kuramba zvido zvedu nezvatinofunga kwaari kuti Iye anotidzosera kudzidziso dzevapositora.
Kuti isu tinzwisise zvakanaka kuti maaritari echokwadi chii tinofanira kudzokera kuTestamente Yekare tonoona kuti maaritari avo aivakwa sei. Aritai yaive nzvimbo yaipirwa zvibairo. Maaritari eTestamente Yekare aive rudzi rwemimvuri yezvibayiro zvehupenyu hwemutendi muTestamente Itsva. Zvibayiro zvedu zveMweya kunaMwari ndeapo patinosiyana nezvido zvedu uye shuviro dzedu, nyota yedu yevasikana, mbiri nendarama, tova chikamu cheMuwono wake Mukuru. Tomutendera kuti aite zvaanoda nesu. Moyo yedu iri paaritari. Mwari anoziva kana zvibayiro zvedu zvakaitwa nechokwadi kubva pamoyo yedu, kana kuti tiri kunyengera kuitira kuda kwedu patinomubatira.
Vaheberu 10:1 Nokuti murayiro zvaunomumvuri wezvinhu zvakanaka zvinovuya usati uri mufananidzo chaiwo wezvinhu izvozvo, haungatongogoni kukwanisa avo vanoswedera gore rimwe nerimwe naizvozvo zvibayiro zvavanoramba vachibayira.
Saka maaritari nezvibayiro muTestamente Yekare zvaive zvisiri nzira inokundisa, asi zvaibata semimvuri yemaaritari uye zvibayiro zvemweya muTestamente Itsva.
Jesu Kristu haafadzwi nezvivakwa zvedu zvemakereke zvikuru uye masiteji anoitirwa zvibayiro zvinosimudza shungu dzedu. Nziyo dzekurumbidza dzakanakisa, dzinobata moyo hazvina zvazvinoreva pasina chokwadi muna Mwari. Vadzidzi vaifunga kuti chivakwa chetemberi mumazuva avo chaiyevedza, asi Jesu akavazivisa kuti haafadzwi nazvo.
Mateo 24:2 Jesu akapindura akati kwavari, munovona zvinhu izvi zvose here? Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hakungaregwi ibwe pamusoro pebwe risingazowisirwi pasi.
Mateo 24 ndiyo chaputa inotaura pamusoro penguva yekupedzisira. Izvi zvese zvichasara kubva pamakereke akaitwa nevanhu mamega chechi achave murwi wevhu namabwe. Kana takatarisira chinhu chichagara nekusingaperi, hatisi kuzochiwana muchivakwa chekereke.
Mumashure mekunge Israeri yagadzikika mumusha mayo mechipikirwa Paresitina, Soromoni akapiwa murayiro wekuvaka temberi, tinoona zvakare murayiro waMwari uchirambidza kushandisa midziyo yedare pakuvakwa kwetemberi. Mabwe ese anofanira kuva akagadzirwa akaunzwa kunzvimbo iri kuvakwa, ongoiswa panzvimbo dzawo.
1 Madzimambo 6:7 Zvino imba pakuvakwa kwayo, yakavakwa namabwe akanga agadzirwa ipapo pavaiputsa; pakuvakwa kwayo hapana kunzwikwa mukati meimba nyundo, kana sanhu, kana nhumbi ipi neipi yedare.
Saka zvakakosha kuna Mwari kuti hapana kusanganiswa kwemhumbi dzedare kana tasvika pakuvaka imba yake kana aritari. Kana tikazovaka temberi yehupenyu hwedu hwemweya, tinofanira kuva nechokwadi chekuti takoshesa murayiro wakajeka uyu. Sezvo mabwe asina kuvezwa pamweya anomiririra hupenyu hwevanotenda muna Jesu Kristu, saka zvakare, nhumbi dzedare dzine dudziro yadzo pamweya.
Kubva muBhaibheri, dare muruvoko rwemunhu rinomiririra bato rinorwisa. Izvi zvinogona kureva bato rematongerwo enyika kana rezvechitendero. Tinowana nzira yedu yekutanga pane izvi kuna Danieri
Danieri 2:40 Ushe hwechina huchava nesimba sedare, sezvinoita dare rinoputsanya nokuparadza zvose, sezvinoita dare rinopwanya izvi zvose, saizvozvo uchaputsanya nokupwanya.
Danieri akaona ramangwana rehumambo hweBabironi mukati menguva yekutonga kwaNebuchadnezzari nehumwe hushe hwemaHedeni hutatu hwaizotevera. Mumashure mekutonga kwaNebuchadnezzari maMedzi nemaPesia akatora humambo, Alexander Mukuru akavakunda maHedeni akatonga nyika sehushe hwechitatu.
Roma yakamuka seHumambo hwechina, inomiririrwa nedare.
Nhasi humambo hwepasi rino hunomiririrwa netsoka dzakaitwa nevhu nedare. Neimwe nzira simba reRoma richiri kukurudzira masimba ezvematongerwo enyika anhasi. Dare harisangani nevhu saka harisi simba rine hudzvanyiriri hwakazara pamusoro penyika sezvazvaive muNguva yeRima, (kunana 6 00 AD kusvika 1500 AD). Nhasi uno Roma yave simba mune zvechitendero rinokurudzira vatungamiriri pasi rese risingatore masimba avo zviri pachena.
Roma yakasimuka kuva simba rekereke uye rezvemari.
Pope anozviti ndiye musoro wezvemweya pamusoro pevanhu 1,2 biriyoni vanotenda muchiCatholic. Vanhu ava vakatambira Pope semutungamiri wavo pamweya, pasina kana kupindira kwechokwadi chekuti vanaPresidenti kana Prime Minisita mutongi wavo wezvenyika. Saka Pope ndiye ega munhu ane vanomutevera munyika dzese. Saka makumbo edare mumufananidzo waDanieri anomiririra Roma yehipegani yanaCasari yakashanduka, ikava zvidimbu zvidiki zvidiki zvedare zvakasangana nevhu mutsoka dzese. Roman Catholic iri kusanganiswa munyika dzese pasi rese.
Sangano reRoman Catholic ndiro sangano remaKristu rakakurisa pasi rese.
Simba guru rekugona kubatanidza vanhu kukereke yeRoman Catholic rinoratidzwa nesimba rakabatanidza maatomi edare pamwechete rakasimba kukunda riri mune mamwe maatomi ese.
Mumufananidzo waDanieri, dare ndiro rega simbi inoita ngura. Musoro wendarama unomiririra mazano akachenjera echitendero chakavanzika cheBabironi. Zvakavanzika zveBabironi izvi zvakapinda muRoma Caesari paakaita mupirisita mukuru kana kuti Pontiff muna 63 BC. Zvino zvakavanzika izvi zvakapinda mukereke yeRoman Catholic apo Pope Leo I paakatora chinzvimbo chaPontiff, makore akapoteredza 450 AD. Zvakavanzika zvechipegani izvi zvakabva zvatanga kuvoresa chiKristu. Izvi zvinomiririrwa nekuita ngura kwedare.
Kutapwa kweIsraeri muEgipita kunofananidzwa nevira rematare:
1 Madzimambo 8:51 Nokuti ndivo vanhu venyu, nenhaka yenyu yamakabudisa Egipita pakati pevira ramatare.
Israeri payakarasika Mwari akavaisa mumavoko aJabini, Mambo weCanani. Zvakare kutambudzwa kwavo kunoratidzwa nedare. Ngoro dzinomirira simba rekushungurudza kwedare.
Vatongi 4:3 Zvino vana vaIsraeri vakachema kuna Jehova, nokuti wakanga ane ngoro dzamatare dzinamazana mapfumbamwe, akamanikidza vana vaIsraeri kwazvo makore ane makumi maviri.
Asi Mwari haadi kuti isu vemasangano akabuda muRoma tivimbe nebato redu resangano rakaoma sedare rinongova mufananidzo wekereke yeCatholic. Kusungwa musangano hakubatsiri sezvo kune masagano anosvika 30 000 akasiyana siyana pakati pemakereke. havangakwanise kuva vese vachinatsa. Kutevedzera kuita kweRoma pano panyika kunoita sekwakanaka kwamuri, asi hakuna zvakunoreva kuna Mwari.
Mapisarema 20:7 Vamwe vanovimba nengoro, vamwe namabhiza; Asi isu tichareva zita raJehova Mwari wedu.
Isaya 31:1 Vane nhamo vanoburukira Egipita kundotsvaga kubatsirwa, vanotenda mabhiza vanovimba nengoro dzokurwa nokuti izhinji, uye navatasvi vamabhiza nokuti vane simba kwazvo asi havatariri kuno Mutsvene waIsraeri, kana kutsvaka Jehova!
ChiKristu chemasangano chakasimba kwazvo. Asi Mwari vanoda kuti tirarame neBhaibheri. Masangano harisi izwi raungawane muBhaibheri.
Zvakare, kumberi muBhuku raMadzimambo, Zedekia muporofita wenhema aigadzira nyanga dzedare kumiririra zaruriro dzake dzenhema dzinorwadza. Ahab, mambo waIsraeri, aida kuenda kuGileadi kunokunda vaSiria vaipamba. Zedekia akamuudza zvaaida kunzwa, kuti Ahabu aizokunda, akashandisa nyanga mbiri dzedare kuratidza simba raAhabu remauto rinotyisa. Simba redare rinotyisa uye rinoputsanya hupikisi hwese. Ahab akaratidza simba rekutambudza iri nekuisa Micaia, muporofita waMwari wechokwadi, mutorongo nekuda kwekuti aive ataura chokwadi. Hutongi hwedare hautarisiri chero maonero anopikisa ari api zvawo. Hutongi hwedare hunoratidza kuti ndiyani ari kutonga chete, asi hahuratidzi chokwadi.
1 Madzimambo 22:11 Zedekia mwanakomana waKenaani akazviitira nyanga dzamatare, akati, Zvanzi naJehova, 'Nedzidzi muchatunga vaSiria, kusvika vapera.
1 Madzimambo 22:24 Ipapo Zedekia mwanakomana waKenaani akaswedera, akarova mikaya padama rake, akati, Mweya waJEHOVA wakaenda nepiko uchibva kwandiri kudotaura newe?
25 Mikaya akati, Uchazviona musi uyo wauchandovanda muimba yomukati.
26 Ipapo mambo weIsraeri akati, batai Mikaya, mumuise kuna Amoni mubati weguta, nokuti Joashi mwanakomana wamambo.
27 Muti, Zvanzi namambo, pinzai munhu uyu mutorongo, mumupe zvokudya zvokutambudzika, nemvura yokutambudzika kusvika ndichidzoka norugare.
28 Ipapo Mikaya akati, Kana mukadzoka norugare, Jehova haana kutaura neni, Akati, Izwai imi vanhu, imi mose.
Zedeka aishandisa nyanga dzedare pakushopera kwake. Dare rakaomarara. Izvi zvinotaura nekushandisa simba rehutsinye uye kumanikidza kuti akwanise kuita zvaidiwa namambo wemaJuda. Asi izvi zvaive zvisiri zvaidiwa naMwari, saka Ahab akasvika pakuvurawa.
Dare rinomiririra mweya wakaoma wechiKristu chemasangano. Kereke yega yega ine chokwadi chekuti iri kunatsa, saka kana usingawirirane nayo unenge uriwe uri kutadza. Kana uchida kupinda kereke yedu unofanira kuita zvinhu nenzira yedu. Kana ukasimudza gakava kune zvatinoita kana zvatinotenda, ipapo hatina chatinozoda pamusoro pako. Dare rinotonga nekuita kuti vanhu vagare panzvimbo dzavo. Nyaya iripo hachisi chokwadi; nyaya ndeyekuvimbika nekuteerera kumutemo wesangano.
Izvi “kutonga nesimba redare” mazano evanhu akamiririrwa mune zvematongerwo enyika apo Russia yakavaka “chidzitiro chedare” kana kuti rusvingo kuti iparadzanise Europe yekumabvazuva kubva kuEurope yekumadokero mumashure meHondo yePasi rese yeChipiri. Kwaingove kuratidzira simba rehutsinye uye kumanikidza kuti Europe yekumabvazuva irambe iri pasi peMoscow nekutonga kwayo. Presidenti weRussia aishandisa hudzvanyiriri ndiye aitaura kuti poitwa sei. Vamwe vese vaingovepo kuti vamuteerere uye kuti vaite zvese nenzira yake. Akavarai Russia inongotumira matangi ayo kuzokuparadzai. Vanhu vaitenderwa kufunga nenzira yavaiudzwa neRussia kuti vafunge nayo. Mhinduro huru yekupedzisira yaive kusaririra, nhamo, nemitsetse mirefu muRussia nemuEurope yekumabvazuva kuti vanhu vawane zvinhu zvakavakoshera mudzimba. Pakavhurwa chidzitiro chedare muna 1989 pakauya makore ekukura nekubudirira kunzvimbo iyoyo nekuti vanhu venyika dzakasiyana-siyana vaive vakukwanisa kutaurirana nekufambidzana. Mari mumisika yemari pasi rese yakatanga kusimuka. Kubviswa kwechidzitiro chedare ichi, chaingova chikanganiso kunezvemabhizimisi uye rusununguko rwekufunga, kwakaona maChina nemaIndia anosvika 200 miriyoni vaive varombo vachisimukira zvaishamisa muhwaro hwavo hwekurarama. Vanhu vakabatsirikana pakabviswa “chidzitiro chedare” ichi chaive chikangaidzo chaive chakaiswa nemutungamiriri anoda kutonga ari ega.
Ichi ndicho chakavanzika chebudiriro yekukura kwemasangano, inovimba nechibhakera chedare kuti vamanikidze vanhu kutenda chinhu chimwechete. Vatungamiriri kana kuti vafundisi ndivo vanotonga kereke, vanoparadza hupikisi vosukurudza pfungwa dzevakawanda kuti vatende mune zvavanofunga ivo. Unotenderwa chete kutenda zvinotendwa mazviri nesangano rekereke yauri. Sangano rinogamuchira mazwi akabatwa paitaura mutungamiriri senheyo dzekutenda kwavo. Asi vamwe vatungamiriri vanoturikira neimwe nzira kumasangano avo. Ndicho chikonzero nei tiine masangano akasiyana anodarika 30 000 akasiyana-siyana echiKristu nhasi uno. Kutonga kwedare mumasangano (kana kutonga kwamufundisi) kunosungirira vatendi mukurasika kwakasiyana, kwekurwisana kwemasangano emakereke. Asi mhinduro yekupedzisira ndihwo hurombo muruzivo rweBhaibheri. Vatendi musangano rimwechete havana kusununguka kuyanana nekukurukura zvavanotenda nevemamwe masangano nekuti munhu mumwe nemumwe anonzwa achimanikidzwa kurwira zvavanotenda kusangano ravo. Sangano rega-rega rinotenda kuti riri kunatsa uye havade chiro. Vanovaka zvavonofunga pamusoro pedzidziso pavari serusvingo. Hapana chavanoda kudzidza kubva kune vanobva kunze.
Nzira iyi inoita kuti maKristu mazhinji agare mukusaziva muzvikamu zvizhinji zveMagwaro.
Tarirai ndiwo marudzi aKaini kubva kwaari ndiko kwakatangira mabasa edare mushoko.
Genesisi 4:22 Zira wakapona Tubarikaini, mupfuri wenhumbi dzose dzendarira nedare; hanzvadzi yaTubarikaini waive Naama.
Mumashure memvura yaNoa takaona humambo hwekutanga hwakaitwa naNimrod.
Genesisi 10:9 Akanga ari mudzimba mukuru pamberi paJEHOVA: naizvozvo vanoti, SaNimurodi, mudzimba mukuru pamberi paJEHOVA.
Nimurodi aive mudzvanyiriri ane simba kwazvo zvekuti mupfungwa dzevanhu akava pamberi paJehova. Vanhu vaive vachikoshesa zvaitaurwa naNimrodi pane zvaitaurwa naMwari. Ndiro dambudziko guru nechiKristu chemasangano. Nhengo dzinoramba dzichidzokorora zvakataurwa namufundisi kana nemutungamiriri, pachinzvimbo chekuedza kutsigira kutenda kwavo neBhaibheri.
Iyi ndiyo mbeu yesangano. Itai mutungamiriri ane simba, zvavanotaura zvikabatwa nevanhu zvinozoonekwa sezvakakosha kukunda Shoko raMwari.
Genesisi 10:10 Ushe hwake hwakatanga paBaberi, neEreki, naAkadi, neKarine, panyika yeShinari.
Hushe hwake hwaive parusvingo rweBaberi rwaimiririra chitendero chaaitenda. Zvakavanzika zveBaberi zvakapararira kuenda kune mamwe maguta uye zvaive urimbo hwekubatanidza hushe hwechiHedeni hwekutanga uhu pamwechete. Hurongwa hwechitendero ndiyo kiyi yekuva sangano rakabudirira. Vanhu vanozviwisira zviri nyore kumutungamiri ane simba, kunyanya kana vakaona achiratidza mabasa pamberi pavo. Mutungamiriri kana mufundisi ane simba rekudzinga vanhu mukereke.
Pamufananidzo waDanieri hushe hweRoma yechipegani hwaimiririrwa nemakumbo edare eRoma yekumadokero neyekumabvazuva. Kuwa kwakaita hushe hweRoma muna 476 AD kwakatungamirira kunosimuka kwekereke yeRoman Catholic pasi rese inomiririrwa nezvidimbu zvedare mutsoka dzemufananidzo. Tsoka dzinomiririra nguva nomwe dzemakereke dzakatora makore 2 000 enhorondo yevanhu. Ivhu rinomiririra kereke yechokwadi panguva yega yega nekuti mbesa dzinokura muvhu. Saka ivhu ndicho chega chikamu chemufananidzo chinokwanisa kupa hupenyu. Pakupedzisira kereke yeRoman Catholic inodaidzwa kuti Babironi yakavanzika kuna Zvakazarurwa chaputa 17. Zvakavanzika zveBabironi yekare, tichitanga nerusvingo rweBaberi, zvakazviwanira nzvimbo yekuzorora musangano rekereke yeRoma. Vemasangano akabuda mairi vari kuitawo mufananidzo wekereke yeRoma pavanotevedzera nzira dzayo nezvakavanzika zvayo.
Mwari akaripisa vaIsraeri pavasina kutevera mirayiro kupfurikidza kutambudzika nemarwadzo pasina kunaya kwemvura:
Revitiko 26:18 Zvino kunyangwe zvakadaro musingadi kunditeerera, ndichawedzera kukurovai pamusoro pezvivi zvenyu.
19 Ndichaputsa kuzvikudza kwenyu pamusoro pesimba renyu, denga renyu ndichariita sesimbi nenyika yenyu sendarira.
Saka Bhaibheri rinojekasa pamusoro pekuipa kwesimba redare mumasangano, uye ndicho chikonzero nei Mwari anokoshesa kuti aritari isavakwe nedare. MaKristu anofanira kuva mabwe asina kuvezwa. Vanofanira kuzvifungira vachikwanisa kutsigira kutenda kwavo neBhaibheri pachavo. Mwari haafadzwi nevanoita seshiri yeparoti vanongotevedzera zvataurwa nevamwe. MaKristu mazhinji nhasi haachatakure Bhaibheri kuenda kuchechi. Havasisina kana basa naro. Kunyanya kana makereke makuru ari kukoshesa mararamiro epano pasi nekurarama hupenyu hwakanakisisa parizvino. Maererano navo hatisisiri pano kuzadzisa Muono Mukuru waMwari, unova kuda kwake. Tingoripo pano kuti tizadzise makaro edu asingaperi neshuwiro dzezvido zvedu. ChiKristu chiri muchimiro chinosuwisa.
Zvinokodzera kuti tidaidze chiKristu chanhasi kuti “churchianity” chichechi chechi.
Kereke yeRoman Catholic ndiro sangano rakaitwa nevanhu rekutanga. Rakararama mukuputsika kwehushe hweRoma apo maCaesari aRoma akauraya maKristu anosvika 3 miriyoni pakati pa 64 AD na 312 AD. Yakararama zvakare pakauya marudzi evatorwa akaparadza hushe hweRoma muna 476 AD. Yakabva yakura kuva nesimba pamusoro pemarudzi evatorwa apo maPope akatanga kugadza madzimambo emarudzi evatorwa, kunyanya mambo wechiFrank aive nesimba kwazvo Charlemagne, akagadzwa samambo weRoma Mutsvene muna 8 00 AD akagadzwa maPope Leo 3.
Nhasi Roman Catholic yapararira pasi rese, uye inesimba guru rekubatanidza rinobata vanhu vanodarika churu chemamiriyoni musangano guru iri.
Kuita kweRoman Catholic kunoitendera kurarama mumamiriro ese ezvinhu pasi rese kwakaita kuti vemasangano akabuda mairi vaiyemure. Vemasangano vakabva vasarudza kutevedzera maitiro eCatholic vakaita mufananidzo weCatholic mumasangano avo. Saka vemasangano vakaita mubatanidzwa wemakereke emasangano une hutongi humwechete kuitira kuvaka makereke anozorarama munguva dzese achipararira pasi rese.
Asi Bhaibheri haritauri pamusoro pechitendero chemasangano.
Zvisinei nekuti zvinangwa zvedu zvakanaka sei, kana tikavaka aritari pasi pekurudziro yedare, rinomiririra misikidzo inoitwa nevanhu mumasangano yakatevedzerwa nevemasangano kubva kuCatholic, chatichawana chete “kuita kukuru” asi Mwari haafadzwi nazvo. Bato pacharo, kuti rishande, rinoworesa chokwadi izvozvo ndizvo zvinovengwa naMwari
Mateo 15:9 Asi vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso iri mirayiro yavanhu.
Ichi ndicho chimiro chekereke chinosuwisa zvakanyanya. Vanhu vanotanga kuita hunhu hwekuti teverai mutungamiri wangu ipapo vobvisa maziso avo pana Jesu neShoko, Bhaibheri.
Bhaibheri rinotaura pamusoro pehumambo hweMereniyamu, hunogara kwemakore chiuru, apo Jesu anotonga nyika pachigaro chaDavidi. Bhaibheri rinoti Achatonga netsvimbo yedare. Izvi zvinoreva kuti achatsikirira zvivi zvese nechakaipa panguva iyoyo pakuchave nerunyararo rwakazara.
Mapisarema 2:9 Muchavapwanya netsvimbo yevutare; muchavaputsanya sehari yomuvumbi.
Zvakazarurwa 19:15 Mumuromo make makabuda munondo unopinza, kuti arove marudzi nawo, uchaafudza netsvimbo yedare; unotsika chitsiniro chehasha dzekutsamwa kwaMwari wamasimba ose.
Iyi ndiyo nguva yekutsiva kwaMwari. Satani akashandisa simba redare kutonga mifungo yavanhu uye kuita uku kwakaiswa patsika dzevanhu nemafungiro avo kwakatungamirira mukurasika kuzhinji mumakereke. MaKristu akanaka mazhinji akaputsanyiwa nemapato ezvechitendero aya. Asi Mwari haana nguva yezvivi. Saka muMereniyamu achashandisa simba redare kuparadza chivi. Saka kana muchida kuveko Naye, dzidzai kuvenga zvivi. Mwari anoda vatadzi, asi anovenga zvivi zvavo. Tinofanira kudzidza kufunga saMwari. Tinofanira kuda vatadzi asi tinofanira kugarira kure nezvivi zvavo.
MaKristu akaponeswa anoenda kumakereke vachanyengerwa nemakereke avo panguva yekupedzisira, vachapedzisira vave munguva yekutambudzika kukuru. Vanonyengerwa nekuti hurongwa hwekereke hunovafadza, kunyangwe vatungamiriri vemasangano vasiri kugara muchokwadi cheBhaiberi. Zvinonakidza kwazvo, vanhu vakawanda vakanyengerwa nedare rinopenya rinodaidzwa kuti Ndarama yeRema. Inoratidzika sendarama chaiyo asi ine mutengo muduku kwazvo.
Ndarama yeRema ine dare rakasangana nesarufa. Sarufa inoda kuita ruvara rwendarama inopa dare ruvara runoita kuti riite kunge ndarama. Zita rinodaidzwa kusarufa neBhaibheri nderekuti surferi. Surferi inoyananiswa nemoto wehadhesi nekuti surferi inotsva nemunhuhwi wakaipa.
Ruka 17:29 Asi nomusi wakabuda Roti muSodoma, moto nesurferi zvakanaya, zvichibva kudenga zvikavaparadza vose.
Zvakazarurwa 19:20 Ipapo chikara chakabatwa pamwechete nemuporofita wenhema, wakaita zviratidzo pamberi pacho, zvaakanyengera nazvo vaya vakapiwa chiratidzo chechikara, navainamata mufananidzo wacho, ava vaviri vakakandirwa vari vapenyu mugomba romoto unopfuta nesurferi.
Zviitiko zvemumakereke zvinotifadza isu vanhu nekuti zvinoratidzika sezvakanaka, asi zvine chokwadi chishoma nekuita kunovaka hupenyu hwedu kunoita kuti tikunde nhema dzinotinyengera zviri nyore. Jesu akamira kunze kwekereke pamukova (Zvakazarurwa chaputa 3) saka mumasangano emakereke hamukwanisi kutipa kutenda kuchatibatsira kuti tipunyuke kubva kunguva yeKutambudzika kukuru ichazadza nyika nemoto nekukasika.
II Petro 3:12 Imi munotarira nokushuva vo kwazvo kuvuya kwezuva raMwari, naro denga richaparadzwa nokutsva, nezvedenga zvichanyauka zvichipiswa.
Kurwa kune mbiri kwazvo pakati pevarwi vaviri kwaive kurwa kwaDavidi naGoriyati.
Davidi akaramba chero nhumbi kana chombo chedare.
Davidi akanhonga hurungudo shanu kubva murukova. Mavara mashanu anoperetera JESUS.
I Samueri 17:40 Akabata tsvimbo muruvoko rwake, akazvitsaurira hurungudo shanu parukova, akadziisa muhombodo yake yomufudzi, yaakanga anayo, imo munhava yake; chifura-mabwe, chake chakanga chiri muruvoko rwake; akaswedera kumuFirisitia.
Imbwe rimwe, risina kubvira rabatwa nedare, rakakunda pakurwa uku.
Hatidi ungano yakakura, kana zvikwanisiro zvinofadza mune zvechitendero, sezvombo zvedu.
Ivai nechokwadi chekuti zvamunotenda mazviri hazvina kuumbwa netsika uye mazano emasangano.
Kutenda muna Jesu, Shoko rakanyorwa, ndiko kuchakunda kurwa kwedu.